Nagarik News - 'स्वस्थ मान्छेलाई सेक्स बढी चाहिन्छ'
होमपेज / शुक्रबार / 'स्वस्थ मान्छेलाई सेक्स बढी चाहिन्छ'
'स्वस्थ मान्छेलाई सेक्स बढी चाहिन्छ'	05 May 2013 आइतबार २२ बैशाख, २०७०
जयन	Be the first to comment! 12345 (3 votes)
सिर्जना बस्नेत, अभिनेत्री सेक्स के हो?प्रकृतिको वरदान हो। यो सबैलाई चाहिन्छ।प्रेम र सेक्सको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ?प्रेममा सेक्सको आफ्नै स्थान हुन्छ। सेक्सले आत्मीयता बढाउँछ तर सेक्सकै लागि प्रेम गरिन्छ भन्ने होइन।बिहेपूर्वको सेक्स कति उचित हो?एकअर्कामा प्रेम र विश्वास छ भने उचित नै हो। तर, भरसक बिहेअघि शारीरिक सम्बन्ध नगाँसेकै राम्रो। यौन शिक्षा कत्तिको आवश्यक छ? एकदमै आवश्यक छ। यौन शिक्षाको कमीले महिलाहरू बढी पीडित छन्। उनीहरू खुलेर आफ्ना यौन चाहना व्यक्त गर्न सक्दैनन्। यौन शिक्षाकै अभावले समाजमा विभिन्न विकृति बढेका छन्। वैवाहिक जीवनमा सेक्स कति महत्वपूर्ण छ? सेक्सले श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्धलाई अरू गाढा बनाउँछ। सेक्स सफल दाम्पत्य जीवनको महत्वपूर्ण सूत्र हो। पुरुषको तुलनामा महिलालाई सेक्सको चाहना बढी हुन्छ भन्छन् नि? महिला–पुरुषभन्दा पनि स्वस्थ मानिसमा सेक्सको चाहना बढी हुन्छ। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। प्रस्तुतिः जयन Tweet Leaveacomment Message *
देखाएकै भरमा कहाँ चलिन्छ र?प्लस टू सकाएर बसेकी थिइन्, सबिना कार्की। सिन्धुलीमा जन्मेहुर्केकी सबिना काठमाडौँ आएको केही वर्ष भइसकेको थियो। स्नातक पढ्न सुरु गर्दा उनले आफूमा हिरोइन बन्नुपर्ने केही आधार पनि विकास गरेकी थिइन्।...	'कथाले जति माग्छ, त्यति लोकेसन'फिल्म 'पशुपतिप्रसाद'लाई समीक्षकले राम्रो ठहराएपछि निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल अहिले फुरुङ्ङ छन् । फिल्म 'द युगदेखि युगसम्म'बाट नेपाली रजतपटमा निर्देशकका रूपमा डेब्यू भएका उनी सधैँ केही फरक गर्न रुचाउँछन् ।...	सुन्दरी छान्ने 'धन्दा'सुरुमा 'तपाईंहरूका लागि एकदमै राम्रो अवसर हो, धेरै तालिम दिन्छौँ, तपाईहरूको नाम चम्किन्छ, आकर्षक पुरस्कार हुन्छ' भनेर लोभ देखाए। त्यसपछि हामीले १० हजारका दरले पैसा दियौँ। तीनचार दिन काम न...	भाषाको भेउ : मामा, ससुरा र मामाससुरा एकै जना हुन् त ?नेपाली भाषामा बनाइएको नयाँ व्याकरणले 'जोईपोइ, लोग्नेस्वास्नी र पतिपत्नी'लाई जोडिएर बस्न दिएको छ। श्रीमान् र श्रीमतीलाई जोडिएर वा टाँसिएर बस्न रोकेको छ। 'भक्तपुर र कान्तिपुर' जोड भन्छ र 'ललित पुर'...	दुःख बाँडौँ, दुःख साटौँमहाभूकम्पले ल्याएको भयावह विपत्तिले जनजीवन ठप्प छ। सरकारले दिएको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार बुधवार बेलुकासम्म पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्तिले महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँ घाइते छन्।	के गर्दैछन् नेइमार?विश्वकपका क्रममा पिठ्यूँको हाड भाँचेका ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेइमार के गर्दै होलान् भनेर कसैले प्रश्न गरेमा अस्पतालमै उपचार गराइरहेका होलान् वा आराम गरिरहेका होलान भन्ने उत्तर पाइने छैन। फर्कियो 'देउराली'कुनै समय चर्चामा रहेर सेलाएको देउराली ब्यान्ड अहिले संगीतकर्ममा फर्किएको छ। ब्यान्डलाई 'कमब्याक' गराउन २०६३ सालमा 'निरन्तरता' एल्बम निकाले पनि यो ब्यान्ड जुर्मुराउन सकेको थिएन। एल्बमको नाम 'निरन्तरता' भए पनि...	बलात्कारीलाई १५ सय वर्ष जेल सजायकुख्यात बलात्कारी अल्बर्ट मोराकले थुप्रै महिलाको जीवन बर्बाद पार्योु। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्ग उच्च अदालतले उसलाई १५ सय ३५ वर्ष जेल सजाय दिएको छ।	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...